Konfirmasiona - Wikipedia
Ny konfirmasiona, ao amin' ny Fiangonana kristiana, dia fomba atao ampahibemaso manome fahafenoana ny fanomezan' ny Fanahy Masina amin' ny alalan' ny fanamafisana ny famantarana azo tamin' ny batisa (na batemy).
1 Konfirmasiona ao amin' ny Fiangonana ôrtôdôksa
2 Konfirmasiona ao amin' ny Fiangonana katôlika
3 Konfirmasiona ao amin' ny Fiangonana prôtestanta
Konfirmasiona ao amin' ny Fiangonana ôrtôdôksaHanova
Tao amin' ny Fiangonana voalohany dia tanterahina avy hatrany aorian' ny batisa ny konfirmasiona, ary mbola toy izany no fanao ao amin' ireo Fiangonana ôrtôdôksa.
Konfirmasiona ao amin' ny Fiangonana katôlikaHanova
Amin'ny Fiangonana katôlika dia sakramenta ny konfirmasiona. Ankehitriny dia heverina ao amin' ny Fiangonana katôlika ho manome hery hijoroana vavolombelona sy mahatonga ny Kristiana ho tonga olon-dehibe ny konfirmasiona. Ao amin' ny Fiangonana katôlika hatramin' ny Andro Antenantenany dia miovaova ny taon' ny olona atao konfirmasiona, ka eo anelanelan'ny 7 sy 15 taona izany. Hatramin' ny Kônsily Vatikàna II dia tanterahina amin' ny fotoana maha vanto-jeza ny konfirmasiona. Amin' ny Katôlika, amin' ny ankapobeny, dia tanterahina amin' ny alalan' ny fametrahan-tanana (izay midika fampitana ny Fanahy Masina) sy fanosorana menaka (izay midika herin' Andriamanitra sy mahatonga ny Kristiana ho olom-boahosotra.
Konfirmasiona ao amin' ny Fiangonana prôtestantaHanova
Ny Anglikana sy ny Protestanta dia tsy manao ny konfirmasiona ho sakramenta, ny batisa sy ny fanasan'ny Tompo (eokaristia) no sakramenta amin' izy ireo. Amin' ny Prôtestanta dia fiarovana ny finoana iantsoana ny tanora ny konfirmasiona mba hanamafisany ny fanekena natao tamin' ny batisa.
Ny sakramenta ao amin' ny fiangonana katôlika:
Sakramentan' ny batemy
Sakramentan' ny Eokaristia
Sakramentan' ny konfirmasiona
Sakramentan'ny fivalozana sy ny fampihavanana
Sakramentan' ny fanosorana ny marary
Sakramentan' ny fanambadiana
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Konfirmasiona&oldid=1014555"
Dernière modification le 11 Aogositra 2021, à 12:33
Voaova farany tamin'ny 11 Aogositra 2021 amin'ny 12:33 ity pejy ity.